Print | Email | Hits: 5898
Ministirri Muummee Itoophiyaa Dr Abiyyi Ahimad gabaasa raawwii hojii mootummaa isaanii kan bara baajataa 2011 mana maree bakka bu’oota uummataaf dhiyeessanii jiru. Caasaan mootummaa dadhabee waan tureef biyyattiin balaa wal fixuuf saaxilamtee akka turte yaadannoo keenya yeroo dhiyooti jedhan. Sabboonummaa mankaraarsuu, ijaraama
al-idilee ta’aniin hokkorawwan uumaman, gaaffilee eenyummaa fi daangaa dahoo godhachuun rakkoolee uumaman, daddabarsa meeshaa waraanaa seeraan alaa, fiinxaleessummaa miidiyaa fi kkf rakkoolee biyyattii keessatti uumameef ka’umsa ta’uu eeraniiru. Mootummaan isaanii kana to’atee, olaantummaa seeraa mirkaneessuuf tarkaanfiiwwan gara garaa fudhachaa akka jirus dubbatan.Walumaa galattis namoonni rakkoolee kanneen keessaa harka qabaachuun shakkaman 1000’tti siqan to’annoo jala ooluu dubbataniiru.Rakkoolee gama diingdee fi dameelee birootiin mudatan furuuf mootummaan hojiitti akka jirus dubbataniiru.Gabaasa dhiyeessan irratti gaaffii miseensota mana maree irraa dhiyaateefis deebii kennanii jiru. ‘Yaaliin fonqolcha Mootummaa FDRI jechuun kan Finfinnee jiru qofa miti jechuun gaaffii ‘yaalii fonqolcha mootummaan’ wal qabateef deebii kennuu kan eegalan. Mootummaan FDRI naannolee hunda kan hammatedha kan jedhan MM Abiy, haleellaan naannoo kam irrattuu raawwatamu mootummaa Federaalaa irratti akka raawwatametti lakkaa’ama jedhan. Qaamni hogganoota olaanoo naannoo tokkoo ajjeesee dhaabbilee mootummaa gurguddoo to’annoo jala oolfatee, miidiyaan ergaan akka darbu ajaja kenne yaalii fonqolcha mootummaa raawwate jedhamuun sirriidhuma jedhan. “Yaalii fonqolcha mootummaa miti warri jedhan akka jiran ni beekna, nuti karoorri isaanii maal akka ta’e hin beeknu, karoorri keenya kana ture jedhanii nutti haa himani” jedhan. Kanneen fonqolchi mootummaa sadarkaa naannootti raawwachuun sirrii miti, akkamitti namni mootummaa naannoo fonqolchuu yaada isa jedhuuf yoo deebisan, “akkamitti namni mootummaa federaalaa fonqolchuu yaada?” jechuun gaafatan Namni hogganoota akka Dr Ambaachew fi Jeneraal Se’aare ajjeesu jalqabumaa nama sirriitti yaaduu danda’u miti, “sadarkaa naannoottis ta’e gandatti fonqolchuun waan danda’amu itti fakkaata jedhan. Waa’ee aanga’oota lamaanii wayita dubbatanis miseensota paarlaamaa hedduu boochisaniiru. “Dr Ambaachewu nama ajjeesan osoo hin taane, kan itti dheekkamuufu garaa nama raasudha” jedhan. Wanta inni uummata Amaaraaf hojjete seenatu gadi baasas jedhan. “Jeneraal Se’aaren ammoo akka daabboo bifa aadaan tolfamuu, jalaa fi gubbaan osoo abiddi itti boba’uu nama biyya isaaf dhaabbatedha” jedhan. Humnooti fonqolcha kana yaalan naannoo Beenishaangul to’achuuf humna guddaa bobbaasanii akka turaniifi Oromiyaa dabalatee naannolee biroo keessattis ajjechaa raawwachuuf qophaa’anii turan jedhan. Loltoonni kanaan dura humnaan masaraa mootummaa seenan, kan Raayyaan Ittisa biyyaa gorsee gadi dhiise namoota kanaan filamanii yaalii fonqolchaa kana keessatti hirmaataniiru jedhan. Jijjiiramni kun sirrii fi Itoophiyaaf furmaata waaraadha kan jedhan MM Abiy, jijjiirama kana gufachiisuuf ta’e jedhamee duulli adeemsifamaa akka ture dubbataniiru.